Doorashada Knfur galbeed oo maanta bilaabanaysa.
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa waxaa Maanta ka bilaabaneysa doorashada Xildhibaannada Aqalka sare qeybta ka imaaneysa degaannada Doelad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Shalay ayaa Guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed. waxaa ay diiwangeliyeen 10 Xubnood oo ku tartamaya Shan kamid ah kuraasta Aqalka Sare, waxaana kujira Saddex Haween ah oo ku tartamaya kuraasta Aqalka Sare.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa saaka laga dareemayaa qaban qaabada doorashada, waxaana Xubnaha tartamaya ay marka hore khudbaddo ay u jeedin doonaan Xildhibaannada Koonfur Galbee kadibna ay bilaaban doonto doorashada.
Kulanka lagu dooranayo qaar kamid ah Xldhibaannada Aqalka Sare Ee Magaalada Kismaayo ayaa waxaa goobjoog ka noqonaya Xubn ka tirsa guddiga doorashooyinka & Gudiga xalinta khilaafadka ee Heer Federaal & mas’uuliyiin kale.
Ciidamada Ammaanka dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwo ka tirsan AMISOM ayaa Maanta siweyn uga qeyb qaadan doona sugida amniga Magalada Baydhabo gaar ahaan Goobta lagu qabanayo doorashada Aqalka sare.
10 Xubnood ee Maanta ku tartami doona Shanta Kursi ee Xildhibaannada Aqalka ee doorashadooda ka dhici doonto Baydhabo, kuwaas oo shalay qaatay shahaadada musharaxnimo ayaa waxaa Magacyadooda ay kala yihiin.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa la filayaa in uu noqdo Maamulkii labaad ee bilaaba doorashada Xildhibaannada Aqalka Sare, iyada oo maamulada kale ee dalka aysan xilligaan u muuqan kuwo doorasho bilaabi kara.
« Taliye xijaar ” waa in la baaraa dadka Ergada aadaya iyo Musharaxiinta xildhibaanada.
Xog ku saabsan Liiska SENETARADA aqalka sare ee Qoor qoor reebay »